विश्वासकी नारी - Smile and love with Prayer Balloons
केवल नारीहरुका लागि एउटा सानो प्रार्थनामा सरिक होऔं ।
घाइतेलाई उपचार गर्दै
येशुलाई तपाईलाई प्रेम गर्न दिनु
प्रभुको योजनामा भरोसा राख्दै
येशुसंग समय बिताउँदै
प्रभुको प्रेम बाँड्दै
म एक विश्वासकी नारी हुँ
घाइतेको उपचार गर्दै
हामी सबैले जीवनमा घाउ–चोट भोगेका छौं । जुन मानिसहरु माथि तपाईले आफ्नो सुरक्षा र प्रेमका लागि भर पर्नुभएको छ, तिनीहरुले तपाईलाई निराश पारेका हुन सक्छन्, तपाई माथि धोका भएको हुन सक्छ, अथवा तपाईलाई छोडेर गएका हुन सक्छन् । सायद् तपाईले आफै माथि गलत निर्णय गरेर वा आफूले पाउनुपर्ने सम्मानका साथ व्यवहार नगरेर चोट पु¥याउनु भएको छ होला ।
तपाईले जे गर्नु भएको भएता पनि फरक पर्दैन, अथवा तपाई माथि जे भएका छन्, येशुले तपाईलाई क्षमा गर्छन् ; तपाईलाई प्रेम गर्छन् र उनी चहान्छन् कि तपाई उहाँ संगै घरमा हुनुहोस् । तपाईले सोच्नुभएको होला कि तपाईले आफूलाई चोट पु¥याउनेहरुलाई अथवा आफैलाई पनि माफ गर्न सक्नु हुन्न । येशुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि क्षमाको क्रियाले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ ।
तर परमेश्वरको सितैको वरदान आदमको पाप जस्तो होइन। धेरै जना त्यस एकजना मानिसको पापको कारणले गर्दा मरे। तर परमेश्वरको अनुग्रह अत्यन्त महान थियो। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरबाट जीवन-दान पाए त्यो एउटै मानिस येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा पाइएको हो।
तर यदि हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्छौ तब परमेश्वर जो विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ हाम्रा पापहरू अनि हामीले गरेको जम्मै गल्तीहरू क्षमा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरमा जे उचित छ त्यही गर्नुहुन्छ।
येशु प्रभु, मलाई चोट पु¥याउने मानिसहरुलाई माफ गर्न मद्दत गर्नुहोस् र मैले गरेका गलत निर्णयहरुका लागि आफैलाई माफ गर्न सक्ने बनाउनुहोस् । मेरा द्धेष र पीडाहरु हटाइदिनुहोस् । मलाई प्रेम गर्नुभएकोमा र स्वीकार गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ । कृपया मलाई तपाईको प्रेमले भरिदिनुहोस् । आमेन ।
यी शब्दहरु ठूलो स्वरमा भन्नुहोस्ः
मलाई सबै पापहरुका लागि क्षमा गरिएको छ ।
म अरुहरुलाई क्षमा दिन सक्षम छु ।
म आफ्ना चोटहरुबाट मुक्त भएको छु ।
मेरो स्वर्गमा घर छ ।
म प्रभुमाथि विश्वास गर्नेछु ।
मलाई थाहा छ, येशुले मेरो पथ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ ।
म प्रभुको प्यारी छोरी हुँ ।
येशुलाई तपाईप्रति प्रेम गर्न दिनु !
येशुले तपाईले सोच्नुभएको भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ । येशुले तपाईलाई बेपरवाह प्रेम गर्नुहुन्छ । आफूलाई प्रभुको प्रेमले पूर्ण हुन दिनुहोस् । तपाई येशुको प्रेम आफ्नो जीवनमा थाहा पाउन योग्य हुनुहुन्छ ।
प्रेम धैर्य हुन्छ, प्रेम दयालु हुन्छ, प्रेमले ईर्ष्या गर्दैन यसले घमण्ड गर्दैन।5प्रेम रुखो हुँदैन, प्रेम स्वार्थी हुँदैन र प्रेम सजिलै रिसाह बन्दैन। प्रेमले आफ्नो विरूद्ध गरिएको खराबीको हिसाब राख्दैन।6प्रेम खराबमा खुशी हुँदैन तर प्रेम सत्यसित आनन्दित हुन्छ।7प्रेमले सबै कुरा धैर्यपूर्वक सहन्छ। प्रेमले सधैँ विश्वास गर्छ, सधैँ आशा गर्छ र यो दरिलो उभिन्छ।
1 कोरिन्थी 13:4-7
येशु, मलाई तपाईलाई आफ्नो हृदयमा स्थान दिनुको अर्थ जान्न दिनुहोस् । मलाई विश्वास गर्न मद्दत गर्नुहोस् कि म तपाईको प्रेमले पूर्ण हुन योग्य छु । म सधैं प्रभुको प्रेमको उदाहरण हुन पाउँ । आमेन ।
तपाईका आँखा बन्द गर्नुहोस् र येशुलाई तपाईलाई अँगालो मार्न दिनुहोस् । उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेको सुन्नुहोस् । उहाँको अनुहारको मुस्कान हेर्नुहोस् किनभने उहाँ तपाईसंग हुनुहुन्छ । त्यो न्यानोपन महसुस गर्नुहोस् जब उहाँले तपाईको आत्मा शान्त पार्नुहुन्छ र निको पार्नुहुन्छ । उहाँको उपस्थितिको शान्ति तपार्ई सम्म आइ पुग्न दिनुहोस् ।
हाम्रो मस्तिष्कलाई यो संसारको दुःख पीडाहरुमा जिउन सजिलो छ । जब हामी जीवनका समस्याहरुमा ध्यान दिन्छौं, हामी प्रभुले दिनदिनै दिनुभएका धेरै आशिषहरुमा ध्यान दिन सक्दैनौं ।
सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। ख्रीष्ट येशूमा हुने तिमीहरूबाट परमेश्वर यही चाहनु हुन्छ।
1 थिस्सलोनिकी 5:18
येशु प्रभु, कृपया मलाई यो सम्झिन मद्दत गर्नुहोस् कि, जब मेरो हृदय कृतज्ञता र प्रेमले भरिएको हुन्छ, त्यसबेला त्यहाँ अरु केहीका लागि पनि ठाउँ नहोस् ।
तपाई कृतज्ञ हुनुभएका सात कुराहरु ठूलो स्वरमा भन्नुहोस् ः
म कृतज्ञ छु कि प्रभुले मलाई जीवन दिनुभएको छ ।
म कृतज्ञ छु कि येशु मलाई बचाउनका लागि मर्नुभयो ।
म कृतज्ञ छु कि म अरुका लागि प्रार्थना गर्न सक्छु ।
म कृतज्ञ छु कि प्रभुको मेरो जीवनका लागि योजना छन् ।
म कृतज्ञ छु कि म प्रभुको छोरी हुँ ।
यस नयाँ दिनका लागि म कृतज्ञ छु ।
म कृतज्ञ छु कि येशुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ ।
आजको विश्वमा हामीलाई भनिएको छ कि हामी सबथोक आफ्नो तरिकाले प्राप्त गर्न सक्दछौं । हामीले दैनिक रुपमा विज्ञापनबाट एक सन्देश सुन्छौं कि यो सबै मेरो बारेमा हो । यी विचारहरुले हामीलाई घमण्डपूर्ण व्यवहार र काम तर्फ डो¥याउँछ जुन आफू र अरुलाई चोट पु¥याउदछन् । येशुले हामीलाई उहाँको योजनामा ध्यान दिन भनेका छन् जहाँ हामी शान्ति, खुशी र सन्तुष्टि पाउँदछौं ।
परमेश्वरले तिमीहरूमा असल काम गर्न थाल्नु भयो अनि अहिले सम्म गरिरहनु भएकोछ। जब ख्रीष्ट येशू आउँनु हुन्छ परमेश्वरले तिमीहरूमा त्यो काम गरी सिध्याउनु हुनेछ। म यस कुरामा निश्चिन्त छु।
येशु प्रभु, मलाई थाहा छ कि तपाई संग मेरो जीवनका लागि योजना छ । सबै कुरा तपाईको भलाईका लागि हुन्छन्, तपाई कै इच्छामा मेरो जीवनका लागि । मलाई यो सम्झिनका लागि मद्दत गर्नुहोस् कि जब म जीवनमा गा¥हो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छु, तपाईले नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ । आमेन ।
ठूलो स्वरमा भन्नुहोस्ः
येशु प्रभु, तपाईका इच्छाहरु, मेरा होइनन् पूरा होउन् ।
येशुले तपाईलाई असिमित प्रेम गर्नुहुन्छ । उहाँको प्रेमले भरिनका लागि आज केही समय निकाल्नुहोस् । तपाई प्रभूको प्यारी छोरी हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईसंग आज समय बिताउन चहानुहुन्छ ।
हामी सबै ख्रीष्टका सहभागी छौं हामीले शुरूमा पाएको विश्वास अन्त सम्म थामिरह्यौं भने यो सत्य रहने छ।
येशु प्रभु, मलाई दैनिक रुपमा तपाईले पुनः स्थापित गर्न मद्दत गर्नुहोस् र मलाई तपाईका शान्ति र प्रेमले पूर्ण हुन दिनुहोस् । मलाई प्रेम गर्नु भएकोमा धन्यवाद छ । म पनि तपाईलाई प्रेम गर्दछु । आमेन ।
आज केही समय बाइबल पढेर बिताउनुहोस् ।
केही मिनेट शान्त रहनुहोस् र प्रभुसंग कुरा गर्नुहोस् ।
येशुलाई तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ भनी भन्नुहोस् ।
एउटा प्रार्थनाको गीत गाउनुहोस् ।
येशु एक राम्रा गोठाला हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बथान जम्मा गर्दछन् । प्रभुले तपाईको जीवनमा निश्चित व्यक्ति राख्दछन् ताकि तपाईले येशुको प्रेम उनीहरु संग बाँड्न सक्नुहोस् ।
“तर हुन सक्छ, तिमीहरू परमप्रभुको सेवा गर्न चाहँदैनौ। कसलाई सेवा गर्छौ त्यो तिमीहरूले निर्णय लिनु पर्छ। के तिमीहरू, तिमीहरूका अगुवाहरूले यूफ्रेटिस नदीको पारिपट्टि बस्दा पूजेका झूटा देवताहरूको सेवा गर्छौ? अथवा, यो भूमिमा बस्ने एमोरी मानिसहरूका देवताको सेवा गर्छौ? तिमीहरू आफैंले चुन्नु पर्छ। तर म अनि मेरो घरनाले भने परमप्रभुकै सेवा गर्ने छौं।”
येशु प्रभु, कृपया मलाई तपाईका सन्तानहरु कहाँ डो¥याउनुहोस् जसलाई मैले सहयोग गर्न सकूँ भन्ने चहानुहुन्छ । तपाईले जस्तै मैले पनि उनीहरुलाई प्रेम गर्न अनुमति दिनुहोस् । आमेन ।
अरुहरु संग बाँड्नुहोस्ः
येशुको प्रेम छिमेकीहरुसंग बाँड्नुहोस् ।
परिवार र साथीहरुसंग बसेर प्रार्थना गर्नुहोस् ।
कसैको समस्याहरु सुनिदिने समय निकाल्नुहोस् ।
कोही एक्लै बस्नुहुनेलाई भेट्नुहोस् ।
भोकाएको कोही संग आफ्नो खाना बाँड्नुहोस् ।
कुनै स्थानीय चर्र्च अथवा घरबिहिनअरुका लागि आवासमा स्वयंसेवा गर्नुहोस् ।
बाइबलका कक्षा लिनुहोस् ।
म एक विश्वासकी नारी हुँ ।
म स्वीकृत भएको छु ।
मलाई माफ गरिएको छ ।
म सुरक्षित छु ।
म चुनिएकी हुँ ।
म विशिष्ट छु ।
म बलियो छु ।
म स्वतन्त्र छु ।
म पूर्ण छु ।
म राम्री छु ।
म येशु क्रिष्टको परिवारको हिस्सा हुँ ।
तिनको बोलीमा ज्ञान छ, र तिनले मानिसहरूलाई मायालु तथा दयालु बन्न सिकाउँछिन्।
मलाई आफ्नो प्यारी छोरी बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ । म एक विश्वासकी नारी हुँ ।
यस प्रेमको सन्देश तपाईले चिन्नुहुने सम्पूर्ण नारीहरु संग साट्नुहोस् ।